दुई तिहाईको सरकार घुमाउने कस्तो बलात्कारी ? - Gokarna News from Nepal
दुई तिहाईको सरकार घुमाउने कस्तो बलात्कारी ?
करिब ६।७ महिना अघि कंचनपूर भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि विभत्स हत्या गरी उखुवारीमा फालिएको अवस्थामा शव भेटियो । घटना भए पश्चात एसएसपी ,एसपी, डिएसपी, तथा सरकारी निकायका उच्च ओहदाका व्यक्तीहरुका नेतृत्वमा अनुसन्धान भए । अनुसन्धानका प्रविदेन आए ।, प्रहरीको लापरवाही भएको निष्कर्ष निस्कियो,एसपी र डिएसपी लाई बर्खास्त गरियो ।
यसैविचमा न्याय चाहियो भन्दै आन्दोलन भए केहिका ज्यान गए ,बाबु मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्थामा पुगे । आमा दिन रात न्यायको भिग माग्दै कहिले प्रधानमन्त्री निवास त कहिले माईतिघरका सडकमा आँसु बगाउदै हिडिन्, धेरै संघ संस्था व्यक्तीहरुका समर्थनमा विरोध सभा प्रदर्शन पनि भए,प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरुले छिट्टै पक्राउ पार्ने आश्वसन पनि दिए तर ६।७ महिना वित्यो बलात्कारी अहिले सम्म भेटिएन। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई विश्वभर अब्बल र प्रभावकारी भनेर चित्रित त गरिएको थियो तर यो प्रकरणले प्रहरी र प्रहरी अनुसन्धानलाई यसरी धमिल्याई दियो कि प्रहरीले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास नै मरेर गएको जस्तो अनुभुती जनताले गर्ने अवस्थामा पुग्यो। कहिले लागु औषध सेवन गर्ने त कहिले कुखुरा चोरी गरेको भन्ने व्याक्ती त कहिले पहिले कुनै अपराघ गरेको व्यक्तीलाई अपराधी भनेर सार्वजनिक गरिन्छ । कहिले निर्दोष व्यक्तीहरुलाई आईजिपी साहेव नै अनुसन्धानमा खटिएर ४।४ घण्टा सम्म बक्न लगाईन्छ । र अपराध स्विकार गरेको भन्दै संचार माध्यममा समाचार छपाईन्छ तर अपराध स्विकार गरिएको व्यक्तीको डिएनए मिल्दैन् । निर्दोष व्यक्तीहरुलाई हिरासतमा लिईन्छ अनि विभिन्न प्रलोभन डर र धम्की दिदै कहिले अपराध स्विकार गरे प्रहरीमा जागिर लगाईदिनते त कहिले केके हो के के… भन्दै प्रलोभन दिईन्छ । डर धम्की त्यस्तै निर्दोष व्यक्तीलाई दिईन्छ ,अपराधि भेटिदैन । अनि कस्तो अनुसन्धान गर्दै छ नेपाल प्रहरी भन्ने प्रश्नले जनमानसनै रनभुल्लमा परेको छ।
सरकारका बहालबाला मन्त्रीहरुले बलात्कारी भेटिसकेको छ , केही दिनमै सार्वजनिक हुन्छ भन्दै सार्वजनिक रुपमै वक्तव्य दिन्छन तर नत बलात्कारी भेटिन्छ नत सरकारले अपराघी सार्वजनिक नै गर्छ । मन्त्री जस्तो व्यक्तीले यति मजाकी धारणा राख्नुले सरकार कत्तिको जिम्मेवार रहेछ त ? हाम्रा जनताका अगुवा मन्त्रीहरु कत्तिको विश्वास गर्ने खालका रहेछन त भन्ने कुरा यसै धारणा बाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
उता विपक्षी दललाई यो घटना राजनिति गर्ने एउटा मसला जस्तै भएको छ ।भने सरकार जिम्मेवारी होईन कि मजाकी धारणा र जनतालाई झुक्याउनमै व्यस्त छ ।
आज संसदमा निर्मला प्रकरणका बिषयमा गृहमन्त्री र संसादहरु बिच सवाल जवाफ भए । सरकार पक्षिय दलका नेता तथा माननियहरुले विपक्षीलाई राजनिति गर्ने खुराक मिलेको बताए ।र अनुसन्धान अगाडी बढाएकोमा सरकारलाई धन्यावाद दिए तर ६।७ महिना विति सक्दा समेत एउटा घटनाको अनुसन्धानमा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र लाग्दा समेत अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु चाँही सरकारको प्रभावकारीता र नेपाल प्रहरीको त्यो गर्विलो ओझलाई यस घटनाले कत्तिको प्रभाव पारेको होला भन्ने तर्फ माननिय ज्युहरुको ध्यान शायद तेता नपुगे जस्तो देखियो । माननिय ज्यूहरु आँखा चिम्लिएर सरकारकै अन्धभक्त भएर अगाडी बढ्न मात्र जनताले तपाईहरुलाई जिताएर पठाएका शायद नहोलान । माननिय ज्यूहरु पिडित र अन्यायमा परेका जनताको आवालाई बुलन्द पार्नुस र पिडितलाई न्याय दिने कुरामा संसदमा पक्ष विपक्ष बनेर होईन निष्पक्ष धारणा राख्नुस । सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुको साटो कहिले संसदमा त कहिले सडकमा रडाको नमच्चाउनुस ।
निर्मला पन्त प्रकरण जस्ता कैयौ घटना देश भर अनेकौ प्रकारका छन् । कोही पँहुच नपुगेर त कोही पैसाको मिलिमतोमा नै अपराधलाई थामथुम पार्ने प्रवृती भने नौलो होईन ।समाजवाद र जनताको शाशन ल्याउने भन्दै युद्धमा होमिएका नेता र दलहरु नै सरकारको नेतृत्व गदैछन् । तर गरिब निमुखा जनतालाई नत त लोकतन्त्रतन्त्र आएको छ नत गणतन्त्र नै पँहुच हुने वालालाई न कानुन छ न नियम ।कानुन छ त गरिब निमुखा जनतालाई ,अराबौ भष्टचार गर्छन,अदालतले सफाई दिन्छ ,अनी धन हुनेलाई धरौटीमा छाडिन्छ ,गरिब निमुखालाई चाही चिसै सिडिमा फालिन्छ , के धन हुनेको मात्र इज्जत हुने गरिबको इज्जत नहुने हुन्छ र ? भष्टचार गर्न जनताको रगत पसिनाले कमाएर तिरेको राजश्वबाट आफु पालिने र उल्टै जनतालाई चुस्ने व्याक्तीहरुलाई चाही इज्ज्तको डरहुने र पैसा फाले वापत छाड्न सकिने ? कस्तो समाजवाद हो कस्तो जनताको शासन हो? यस्ता वेथितिका कुरा लेखे एउटा पुस्तकको ठेलीनै बन्ला!
अहिले केपि ओलीको नेतृत्व अर्थात नेकपाको दुई तिहाईको सरकार जसलाई निर्मला पन्त प्रकरणले घुमाईरहेको छ । कस्तो बलात्कारी हो,जसले अधिकार सम्पन्न सरकार तथा प्रहरी निकाएलाई नै महिनौ देखी धुमाईरहेको छ । दुई तिहाई सरकारलाई धुमाउने कस्तो वलियो बलात्कारी होला …???
– बिष्णु आचार्य